Maxkamadda ugu sarraysa Dalka Kenya oo qaadatay go’aan aan horay uga dhicin Afrika oo ku saabsan…. – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 2nd September 2017 033
Gudoomiyaha guddiga doorashada
Haddalkii u horreeyay ee ka soo yeera gudoomiyaha Guddiga Doorashada Kenya, Wafula Chebukati wuxuu ahaa in ay dhaqan galin doonaan amarka maxkamadda ugu sarraysa dalka Kenya, ayna ku celin doonaan doorashada madaxweynenimada ee Kenya.
Wuxuu intaas ku daray in guddigu uu samayn doono isbadallo dhanka shaqaalaha ah iyo mid habka ay doorashada u qabtaanba ah, si ay doorasho cusub ugu qabtaan 60 maalmood gudahood.
Chebukati wuxuu sheegay in dhibaatada ay garsooreyaashu arkeen ay tahay natiijada, ee aysan ahayn codaynta iyo tirinta codadka ee goobihii ay codbixintu ka dhacday.
Wuxuu dacwad oogaha guud ee Kenya ugu baaqay in uu baaritaan ku sameeyo shaqaale kaste oo jabiyay shuruucda doorashada.
Maxkamadda ugu sarraysa dalka Kenyana wuxuu ka dalbaday in ay daabacdo macluumaadka xukunka ay ridday oo dhamaystiran, si ay si dhakhso ah isbadal ugu samayso hannaanka uu guddigu u shaqeeyo.
Sharciga Kenya wuxuu dhigayaa in maxkamadda ugu sarraysa ay 21 maalmood gudahood ku daabacdo dhammaan macluumaadka la xiriira xukunka ay riddo.
Daawo: Sida looga ciiday qaar kamid ah deegaanada iyo dagmooyinka ay maamulaan kooxda Alshabaab
Dhagayso:-Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo ku Dagaalamay degaanka moodamoode
Dhagayso:- Sheekh Maxamed Ibraahin shakuul oo Khudbad kajeediyeey Xarunta Calema sarka